Mandritra ny fanazaran-tena dia mora amintsika ny miteraka hozatra sy hozatra fihenan'ny hozatra satria overexertion. Rehefa mitranga ny fihenan'ny hozatra sy ny tenda fihenan'ny atidoha dia hahatsapa fanaintainana isika. Na dia tsara ho an'ny fahasalamantsika aza ny fanatanjahan-tena dia midika fanatanjahan-tena mety izany. Raha tsy mandray araka ny tokony ho izy isika ...
Fa maninona isika no tokony handinika tsara ny soroka
Ny tenda scapular dia taova fihetsiketsehana lehibe amin'ny vatan'olombelona. Sahirana isika dia afaka miasa sy miala sasatra tsy misy azy isan'andro. Amin'ny maha-iray amin'ireo fihenan-danja amin'ny vatan'olombelona, ​​ny soroka dia mivezivezy amin'ny fotoana rehetra. Ny fahasalamany dia mamaritra mivantana ny kalitaon'ny fiainana sy ny kalitaon'ny fiainana a ...
Tongasoa eto Qiangjin ary fantaro bebe kokoa momba anay.
Yangzhou Qiangjin Sports Products Co, Ltd dia mamorona fiarovana ara-panatanjahantena matihanina toy ny fanohanana ny lohalika, fanohanana ny tànana, fanohanana ny sela, fanohanana palma, fonon-tanana amin'ny fanatanjahantena, fanohanana ankihavanana, satroka, fanohanan'omby, posture fanohanana, fanohanana ny soroka ary fitaovana hafa maro fanatanjahantena ho an'ny pr. ..